Matipi ekuti uwane ndege dzakachipa kwazvo | Kufamba Nhau
Carmen Guillen | | Matipi, General, famba
Paunenge uchifamba, ndege ichiri chimwe cheiyo sarudzo dzakanyanya kusarudzwa nevazhinji vafambi kutenderera pasirese, saka kuwana nendege dzakachipa uye dzinodhura kune angangove ese mabhajeti chinhu chinenge chakakosha basa. Mune ino chinyorwa isu tinoda kufambisa zvakanyanya iyi sarudzo uye nekudaro chengetera kune dzimwe nzira dzinogona kuitika dzerwendo. Iwe haufunge kuti ipfungwa yakanaka here?
1 Tevedza aya marongero kuti uwane ndege dzinodhura ...
1.1 Tsvaga mumitengo inoenzanisa
1.2 Isa mutengo wako wekuzivisa
1.3 Bheji pane kuchinjika
1.4 Sarudza isingadhuri asi yakaenzana yakanaka uye yekune dzimwe nzvimbo
1.5 Verenga mari yekuwedzera
Tevedza aya marongero kuti uwane ndege dzinodhura ...
Tsvaga mumitengo inoenzanisa
Unogona kuenda peji nepeji, yendege dzakasiyana dzinoshanda munyika yako uye dzinobatanidza iro guta raunogara kune iro raunoda kuenda kunoshanyira, kana zvinopesana, kukuchengetedza nguva uye nemari, uchiita tsvagiridzo pamapeji ewebhu akatsaurwa kuenzanisa mitengo nekukupa iwe kubva pamitengo yakachipa kusvika kune anodhura uye akazara.
Neiyi nzira, iwe unenge usiri kungo chengetedza iyo yakakosha nguva iyo iwe zvechokwadi usina yakawandisa, asi iwe zvakare uchave uine hwakawanda hwakawanda hwezviitiko zviripo (ndege, mitengo, masevhisi, nezvimwewo) kusarudza kubva.
Isa mutengo wako wekuzivisa
Mapeji mazhinji evanofananidza nedzimwe ndege dzinopa mukana we gadzira yambiro yemitengo kana vakadzika vatizivise kuburikidza neemail kana sms kune nharembozha yedu. Nenzira iyi hatizofanirwi kugara tichiziva kuti mutengo wendege yatinoda wadzikira here kana kuti kwete. Uye kana kunetsekana kwako kuri kumwe: kupihwa kukuru kwenzvimbo dzekuenda, pamazuva chaiwo, kana nzvimbo dzakakurumbira pamisi inochinja, iwe uchave nemukana zvakare mumainjini ekutsvaga akadai Kayak, semuenzaniso.
Bheji pane kuchinjika
Kana iwe usina yakatarwa uye yakatarwa zuva rekubhururuka uye iwe unogona kutora mukana kune akati wandei anowanikwa mazuva, ndicho chinhu chakanakisa chinogona kuitika kwauri kana izvo zvaunoda kuri kuchengetedza. Nenzira iyi, kusarudza anochinjika mazuva, mazuva ari pamusoro uye pazasi pezuva rakasarudzwa kana kutochinja mwedzi, iwe unogona kusevha yakanaka spike mune yako ndege mitengo. Iye zvino chava chirimo, apo patinonyanya kuona mhando dzemitengo iripo uye musiyano uripo pakati pekubhururuka mwedzi mumwe kana mumwe. Ndiani angagadzira mwaka wepasi, wepakati nepakakwirira?
Sarudza isingadhuri asi yakaenzana yakanaka uye yekune dzimwe nzvimbo
Kana isu tikatsvaga pane chero peji rekubhururuka kuenda kunzvimbo dzeRome, Paris, Berlin kana New York, zvine musoro uye zvakajairika kuti vanobuda pakakwirira pakakwirira, nekuti ndidzo dzinonyanya kutsvaga nzvimbo nevanhu nemakambani vanoshandisa izvo . Zvisinei, kune zvekare zvakanaka uye zvekushanya nzvimbo asi zvishoma zvinozivikanwa zvakachipa chaizvo kubhururuka mazviri. Semuenzaniso, maguta akaita seTimisoara kana Lamezia Terme anonzwika zvaunoziva kwauri? Vanogona kunge vasiri Milan kana Barcelona, ​​asi vane zvakare hunyoro hwavo kuti vaone uye tinokuvimbisai kuti huwandu hwekuchengetedza musiyano pakati peguta neguta hwakanyanya.
Nemari iyo yainogona kubhadhara iwe kuti uende kunzvimbo inozivikanwa, iwe unogona kuita maviri uye kusvika kumatatu nzendo ku nzvimbo dzinotsvakwa zvishoma asi dzakangonakawo.
Seye katsamba, isu tichataurawo kuti kune injini dzekutsvaga uye vanoenzanisa mutengo izvo, kumisikidza bhajeti rerwendo rwatinoda kuita, kutipa dzimwe nzvimbo kana dzimwe. Ichi chishandiso inzira yakanaka yekugadzirisa 100% kune bhajeti yatainge taronga pamberi uye nekudaro tisingatarise dzimwe sarudzo "dzakanaka" asi zvishoma zvinogoneka (zvirinani izvozvi).
Verenga mari yekuwedzera
Pane dzakawanda nguva, tichitsvaga yendege yaidikanwa, tauya nemitengo yakachipa kwazvo yaiita kunge isiri yechokwadi kubva pakutanga. Uye saka zvaisaitika ivo vaive! Nekuti ipapo kana zvasvika pakubhadhara iyo yose, kusanganisira mitero, zvakabuda paruoko uye ivo vaive vangangoita zvakafanana kana 100% yakaenzana neiyo mitengo yatakakanzura kubva pakutanga nekuda kwekunyanyisa.
Neichi chikonzero, tinokurudzira kuti iwe utarise kune zvese kana uchitenga ndege: mune dzakasiyana rates kuti ivo vanokuisa iwe, mu Mikwende, zvese nemaoko uye kubhadharisa, uye pakupedzisira, izvo zvavanotibhadharira kubhadhara nekadhi rimwe kana rimwe.
Iwe unofanirwa kutarisa zvese kana uchitenga matikiti endege. Usatipe hoot!
Uye pakupedzisira, isu tinoda kukubvunza iwe: Ndeapi ndege dzawagadzira ndege dzakanakisa? Uye ndeapi akaipisisa? Kuverenga ruzivo rwedu tinogona kubatsirana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Matipi ekutora ndege dzakachipa kwazvo
Matipi ekufamba nembwa yako kutenderera pasirese